कैलालीमा डेंगुको संक्रमण ! डेंगु कस्तो खाले रोग हो ? समस्या देखि सामधानका उपाए वारे जानकारी – सुदूरखबर डटकम
label जीवन बिष्ट query_builder August, 17 2019
धनगढी साउन-३२ ।
कैलालीमा डेंगुको संक्रमण बढेको छ । टिकापुर अस्पतालमा एक महिलामा डेंगु रोगको संक्रमण देखिएको छ । जानकी गाँउपालीका – ८ की ५५ बर्षिय निर्मला बिकमा डेंगु रोगको संक्रमण देखिएको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
जानकी गाँउपालीका – ८ की ५५ बर्षिय निर्मला बिकमा डेंगु रोगको संक्रमण देखिएको निर्देशनालयका भेक्टरकन्ट्रोल सुपरभाइजर हेमराज जोशीले जानकारी दिए । ज्वरो आयर अस्पताल भनानए भएकी बिकको रगत जाँच गरेपछि डेंगु देखिएको जोशीले बताए । बिक एक महिना अघि मात्रै भारतबाट फर्किएको र त्यहिं डेंगुको संक्रमण भएको हुन सक्ने उनले बताए ।
दिउँसो टोक्ने लामखुट्टेले हुने डेंगु संक्रमण बिस्तारै फैलिँदै गएको सेतिअञ्चल अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर निराजन दत्तशर्मा पौडेलले बताए ।
यो वर्ष हालसम्म डेंगुले कसैको ज्यान नगए पनि संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने उनको भनाई छ । उनले भने डेंगु दिउँसो टोक्ने ‘एडिस एजेप्टाई’ र ‘एडिस एल्वोपेक्टस’ नाम गरेको लामखुट्टेले टोकेर हुने तीव्र भाइरल संक्रमण हो । यी लामखुट्टेले नै चिकेनगुनिया, यल्लो फिभर, जिका संक्रमणसमेत फैलाउँछ । त्यसैले बिशेष सजगहुनु पर्दछ ।
डेगुंको संक्रमण देखिए तत्कालै उपचार नगरे मानिसको मृत्युसमेत हुन सक्ने डा. शर्माले बताए । उनले थपे, डेंगुका लागि कुनै विशिष्ट उपचार नभए पनी छिटो रोग पत्ता लागेर सही चिकित्सकीय हेरचाह भए मृत्युदर १ प्रतिशत भन्दा कम हुन्छ ।
रोगीमा ‘डेंगु हेमोरेजिक’ ज्वरो वा ‘डेंगु सक सिन्ड्रोम’ तर्फ संकेत गर्ने एउटा पनि लक्षण देखिएको अवस्थामा तत्कालै अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने डा शर्माले बताए । उनले भने समयमै रोग पहिचान गरी उचित उपचार सुरु गरे ‘डेंगु हेमोरेजिक’ ज्वरो वा ‘डेंगु सक सिन्ड्रोम’ को समेत सम्पूर्ण उपचार सम्भव छ ।
घरवरपर सफा राख्ने,दिउँसो शरीर छोप्ने लुगा लगाउने,पानीका भाँडाकुँडा,ट्यांकी छोपेर राख्नु पर्ने अनावश्यक पानीको चुहावट रोक्ने गरे यो रोगबाट बच्न सकिने चिकित्सकहरु बताउछन् ।
जनमानसमा चेतनाको कमी भएको कारण डेगुंको संक्रमण बढ्दै गएको छ । हाल सम्म यसको सक्रमणले कसैको ज्यान नभए पनी संक्रमण रोक्न नसकिए नजाला भन्न सकिदैन । यस तर्फ सर्वसाधारण र सरोकारवाला निकायले वेलैमा सचेतना अपनाउन जरुरी छ ।
डेंगु के हो ?
डेंगु एक प्रकारको ज्वरो हो । यो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने संक्रामक रोग हो । डेंगुको भाइरसद्वारा संक्रमित भएको एडिस एजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेले यो रोग सार्दछ । यो रोग सार्ने लामखुट्टे ग्रामीण क्षेत्रभन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी पाइने गर्दछ ।
यसले स–साना सफा पानी जमेको स्थानमा फुल पार्ने गर्दछ । खास गरी वर्षाको पानी जम्ने टीनका डब्बाहरू, रंगका खाली डब्बा, थोत्रो टायर, अलकत्रा वा मट्टितेलका खाली ड्रमहरू, फुलदानी, गमला, पानीका ट्ंयाकी आदिमा यस्ले फुल पार्दछ । सहरी क्षेत्रमा यस्ता वस्तुहरू पर्याप्तमात्रामा हुने भएकाले पनि यो लामखुट्टे सहरमा बढी पाइने गर्दछ ।
डेंगु एडिस एजेप्टाई र एडिस एल्वौपेक्टस नामक लामखुट्टेले टोकेर हुने तीब्र भाइरल संक्रमण हो । यो भाइरस डेंगु १, डेंगु २, डेंगु ३ र डेंगु ४ गरी चार प्रकारका हुन्छन् । एडिज लामखट्टे कालो रंगको हुन्छ, जसमा सेतो थोप्लो पनि देखिन्छ । यो लामखुट्टेले विशेषगरी दिउँसो टोक्ने गर्दछ । औलो उत्पन्न गर्ने लामुखट्टे फोहोर पानीमा पाइने भए पनि डेंगु सार्ने लामखुट्टेले थुप्रै दिनदेखि हलचल नभएको स्वच्छ पानीमा फुल पार्छ ।
डेंगु रोग क्लासिक डेंगु, हेमोरेजिक र साक सिन्ड्रोमगरी तिन प्रकारका छन । क्लासिक डेंगु सामान्य प्रकारको डेंगु हो । यो आफंै निको हुन्छ, मृत्युको सम्भावना कम हुन्छ । तर यदि कुनै व्यक्तिलाई डेंगु हेमोरेजिक ज्वरो वा डेंगु साक सिन्ड्रोम भएको छ भने यसको उचित प्रकारले उपचार नगरे मृत्यु हुन सक्छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा यसको लक्षण अनुसार उपचार गरीन्छ । ज्वरो घटाउन सिटामोल खानुपर्छ तथा प्रशस्त झोल पदार्थ खानुपर्छ । तर ज्वरो घटाउने भनेर एस्पीरीन तथा आईबुप्रोफेन भने खान हुँदैन । डेंग ज्वरो विरुद्धको खोप तथा खास उपचार समेत नभएको हुँदा लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै यस रोगको बचावटको मुख्य उपाय हो । डेंगु ज्वरोको शंका लागेमा हुन सक्ने जटिलताबाट बचाउन तत्काल नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्नु पर्छ ।
९ पेट दुख्ने
९ नाक वा गिजाबाट रगत बग्ने
९ रक्तश्राव हुने वा शरीरमा रगत जमेको दागहरू देखापर्ने, बेहोश हुने आदि लक्षणहरू पनि देखा पर्न सक्छ ।